2H2O + O2 + 4Fe (OH)2 → 4Fe (OH)3
(xoog leh) (xoog leh) (xanh trắng) (kanu đỏ)
2 1 4 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + O2 + 4Fe (OH)2 → 4 Fee (OH)3
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan O2
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Fe(OH)3 ()?
Iron II hydroxide waxaa lagu qafiifiyey hawada (joogitaanka oksijiin iyo biyo) si loo sameeyo iron III hydroxide
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan O2 (oxygen) waxay la falgashaa Fe (OH) 2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + O2 + 4Fe (OH)2 → 4 Fee (OH)3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(OH)3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(OH)3 () badeecad ahaan?
O2 + 4Fe (OH)2 → 2 Fe2O3 + 4H2O
Oxygen macdanta birta biyaha
(kh) (digo yara) (rnn) (lng)
(xoog leh) (xanh trắng) (D) (xoog leh)
1 4 2 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta O2 + 4Fe (OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2O
Waa maxay xaaladda falcelinta O2 (oxygen) ee Fe (OH) 2 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Fe2O3 (iron oxide) iyo H2O (biyaha)?
Fe (OH) 2 ayaa la falgala O2
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa Fe (OH) 2 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada O2 + 4Fe (OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2O
acetylene Oxygen biyaha carbon dioxide
2 5 2 4 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2C2H2 + 5O2 H 2H2O + 4CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee C2H2 (acetylene) ay kaga falceliso O2 (oxygen)?
Lead acetylene iyada oo loo marayo tuubada dhalada leh ee fiiqan kadibna kuleylka, gaaska acetylene waa la siidaayaa
Dhacdada ka dib C2H2 (acetylene) waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2C2H2 + 5O2 H 2H2O + 4CO2
hydrogen sulfide Oxygen biyaha baaruud
(kh) (kh) (lng) (rnn)
(xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (waa)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2S + O2 H 2H2O + 2S
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo S ( baaruud)?
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2S + O2 H 2H2O + 2S
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee S (oxygen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh S (sulfur) badeecad ahaan?